(ဆွေဝင်း၊ Myanmar Now ) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇
ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ဖမ်းဆီးခံရသူအကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရတဲ့ ဦးအောင်ဝင်းဇော်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ
ရန်ကုန် (Myanmar Now)—တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူဟာ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဦးအောင်ဝင်းဇော်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ယခုလ ၃ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်က ထောင်ကလွတ်လာပြီး ရန်ကုန်၊ သာကေတမြို.နယ်၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ ထူပါရုံအရှေ.၁၆ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၁၂၅၉ မှာ ရှိတဲ့ လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက်မှာ သူ့မိသားစုနဲ့လာရောက်နေထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ သူနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရဲ.ပြောဆိုချက်အရ ဦးကိုနီသတ်ခံရပြီးကတည်းက ဒီအိမ်ခြံဝင်းရဲ. သံတံခါးမကြီးကို ပိတ်ထားတာကိုတွေ.ရှိကြောင်း၊ နောက်ပြီး ဦးအောင်ဝင်းဇော်ကို လက်ထိပ် ၄၊ ၅ ခုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်အများအပြားက ဒီအိမ်ကိုမကြာသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Myanmar Now ရရှိထားတဲ့ ဦးအောင်ဝင်းဇော်ရဲ. မိသားစုသန်းခေါင်စာရင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအရ သူ့ဇနီးသည်မှာ အသက် ၄၂ ရှိသူ ဒေါ်မင်းမင်းထိုက်ဖြစ်ပြီး၊ သူ့တစ်ဦးတည်းသောသားမှာ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ.အလုပ်အကုိုင်ဟာ "ကုန်သယ်" ဆိုပြီး ဒီသန်းခေါင်စာရင်းထဲမှာရေးသာထားတာတွေ.ရပါတယ်။
အဲဒီလို သူအခိုင်အမာပြောနိုင်တာကတော့ ထောင်ထဲမှာတုန်းက သူပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ် အိမ်လိပ်စာရှိရာကို မနှစ်က ဇွန်လတုန်းက ဦးအောင်ဝင်းဇော် တစ်ယောက် ခဲရောင် ပါဂျဲရိုးကားလေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူက ဦးအောင်စိုးဆီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ပေးဖို့ အလုပ်လာအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နေ့ခင်းကြောင်တောင်၊ မြို့လယ်ခေါင်မှာ၊ လူမျိုးမတူ ဘာသာခြားနိုင်ငံခြားသံတမန်တစ်ဦးကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ရမယ်၊ အောင်မြင်ရင် အမျိုးဘာသာအတွက်အကျိုးရှိမယ်၊ အလုပ်လက်ခံရင် သိန်း ၁,၀၀၀ ထိပေးမယ်၊ သတ်ဖြတ်ပြီးရင် DKBA တပ်တွေရှိတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဦးအောင်ဝင်းဇော်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဦးအောင်စိုးကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။